Teren’ny governemanta Amerikana hanome ny tahiry manokan’ireo mpiserasera azy ny twitter · Global Voices teny Malagasy
Teren'ny governemanta Amerikana hanome ny tahiry manokan'ireo mpiserasera azy ny twitter
Voadika ny 07 Marsa 2019 4:46 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Aprily 2011)
Nampifanarahana tamin'ny lahatsoratry ny RWB.
Tapa-kevitra tanteraka hanenjika ny WikiLeaks sy ireo lohandohan'ny mpanohana azy ny Departemantan'ny Fitsarana Amerikana .
“Taorian'ny fanerena natao tamin'ny Paypal, Visa, MasterCard ary Amazon, manamafy ny fanorisorenana an'ny WikiLeaks sy ireo mpanohana azy ankehitriny ny governemanta amerikana,” hoy ny Reporters Sans Frontières.
“Miezaka araka izay vitany mba hitarika fanadihadiana heloka bevava ny governemanta federaly. Fanitsakitsahana goavana ataon'ny fitondrana Obama amin'ny fiarovana ny tahiry manokana izany, izay nanambaran'ny fitondrany hatrany ho manohana ny fahalalaham-pitenena antserasera.”
Nandefa fampiantsoana an'ny Twitter nosoniavin'ilay mpitsara federaly, Theresa Buchanan tamin'ny 14 Desambra ny fitsarana iray ao amin'ny distrikan'i Alexandria, Virginia, mangataka fanazavana “manan-danja” momba ireo mpisera ahiahiana ho mifandray tendro amin'ny WikiLeaks mba hanaovana “fanadihadiana heloka bevava efa mandeha amin'izao fotoana izao”.
Ny fangatahana dia mitaky vaovao nanomboka ny volana Novambra 2009 mikasika ny mpanorina ny WikiLeaks, Julian Assange, Bradley Manning, (miaramila amerikana tsy miankina notazonina satria ahiahiana ho mamoaka ireo telegrama diplaomatika Amerikana any amin'i Assange); Rop Gonggrijp, (olom-pirenena Holandey niasa tamin'ny WikiLeaks); Jacob Appelbaum, (Programera Amerikana); ary i Birgitta Jonsdottir, (mpikambana ao amin'ny parlemanta islandey sady mpilatsaka an-tsitrapo teo aloha tao amin'ny WikiLeaks ).
Miantso ny governemanta amerikana ankehitriny ny Reporters Sans Frontières, ny Fondation Electronic Frontier sy ny Sendikà Amerikana ho an'ny Fahalalahana Sivily mba hiala amin'ny fikasan'izy ireo hahazo angon-drakitra manokana ary hanakatona izany fanadihadiana izany ho fanajana ny fitsipika fototry ny Lalàmpanorenana.
Nilaza i Mark Stephens, iray amin'ireo mpisolovava an'i Assange fa mampiseho ilay fampiantsoana fa mikasa fatratra hanenjika an'i Assange amin'ny heloka bevava ny manampahefana amerikana .
Mahagaga ireo karazam-baovao nangatahana tamin'ny fampiantsoan'ny Sampan-draharahan'ny Fitsarana an'ny Twitter! Ahitana ireo rakitsoratra rehetra momba ny sioka sy fifanakalozan-dresaka eo amin'ireo mpiserasera, adiresy IP, adiresy mailaka sy adiresy paositra, ary izay “fomba sy loharanom-pandoavam-bola” anisan'izany ny kaontin'ny banky sy ny antsipirian'ny tahiry amin'ny karatra fananam-bola. Ny fidirana amin'ny fifanakalozan-dresaka eo amin'ireo mpiserasera sy izay mety ho kaonty iaraha-mitantana dia midika fa mety hahita “olona ahiahiana” vaovao ireo mpanao fanadihadiana.
Nanambara ny mpitsara Theresa Buchanan fa tsy nandika ny Fanitsiana Voalohany amin'ny Lalampanorenana Amerikana, izay miantoka ny fahalalahana maneho hevitra ny fanapahan-kevitra. “Ny Baiko ho an'ny Twitter dia tsy mikasa hifehy na hitantana ny votoatin'ny kabarin'ireo mpanao fangatahana na fikambanana,” hoy izy.
Na dia izany aza, midera ny fanapahan-kevitry ny Twitter nampahafantatra tamin'ireo mpiserasera izay kendren'ny fanadihadiana ny zavamisy ny Reporters Sans Frontières.
Nandidy ny Twitter ny manam-pahefana tamin'ny voalohany mba tsy hilazalaza momba ny didim-pitsarana, saingy taorian'izay heverina ho ady ara-pitsarana, nahazo alalana avy amin'ny fitsarana ny Twitter tamin'ny 5 janoary mba hampahafantatra ireo mpiserasera lasibatra.
Tamin'ny mailaka ho an'ireo mpiserasera izay nohadihadiana, nilaza ny Twitter fa tsy maintsy manolotra ireo rakitra nangatahana ao anatin'ny 10 andro izy raha tsy hoe efa naharay fanamarihana fa nisy tolo-kevitra ara-dalàna napetraka mba hanakanana ny didin'ny fitsarana.
Mihevitra ny WikiLeaks fa mety nalefa tany amin'ny Facebook sy Google, izay mbola tsy namoaka fanambaràna ny fampiantsoana tahaka izany.
Tsara ny manamarika amin'ity toe-javatra ity fa amin'izao fotoana hanoratana izao, manana “mpankafy” maherin'ny 1,7 tapitrisa ny pejy Facebook-n'ny WikiLeaks raha manana mpanjohy maherin'ny 868.206 kosa ny kaontiny Twitter ary miha-mitombo izany.
05 Mey 2021Amerika Avaratra